LIVECAST STATION ထုတ်လုပ်သူများ - China LIVECAST STATION စက်ရုံနှင့် ပေးသွင်းသူများ
KD-LC-8M ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တိုက်ရိုက်ကာစ်တ် ဗီဒီယို တိုက်ရိုက် ကာစ်တ်စခန်း
1. ဗီဒီယိုလုပ်ဆောင်ခြင်း- ဟာ့ဒ်ဝဲပြောင်းသည့်နေရာ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲအချက်ပြမှု (SDI၊ HDMI၊ DVI၊ VGA) + NDI + Stream+ DDR ဖိုင်၊ ရောစပ်ပြောင်းခြင်း၊
2၊ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ခြင်း- ဒစ်ဂျစ်တယ် ရောနှော + အန်နာရောနှော ရောနှော + အသံ ဟာ့ဒ်ဝဲ နှောင့်နှေးမှု ကိရိယာ၊
3၊ ရိုက်ကူးခြင်း- HD ဗီဒီယို MPEg2-HL + MP4 + Built-in ဟာ့ဒ်ဝဲ အသံဖမ်းယူနစ် (အရန်သိမ်းဆည်းခြင်း);
4. တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု- Http၊ Rtmp;
7. စာတန်းထိုးစနစ်၊ အနှေးပြကွက်စနစ်၊ virtual keying စနစ်၊ အသံနှင့် ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်စနစ်၊
10. အရွယ်အစား- 380mm×410mm×170mm;အလေးချိန်: 10 ကီလိုဂရမ်ခန့်;
KD-LC-16UHN အရည်အသွေးမြင့် ကိရိယာ အိတ်ဆောင် လက်တွေ့လုပ်ငန်းသုံး ဗီဒီယိုကင်မရာများ တိုက်ရိုက်ကာစ်တ်
1. ဗီဒီယိုလုပ်ဆောင်ခြင်း- 12G-SDI ဟာ့ဒ်ဝဲ 4K ကူးပြောင်းသည့်ဘူတာရုံ၊ 12G-SDI+HDBaseT+HDMI2.0+NDI (NDI၊ NDI HX ကြိုးမဲ့)+SRT+ထုတ်လွှင့်မှု (တွန်း၊ ဆွဲ)+DDR (ဗီဒီယို၊ ရုပ်ပုံ၊ PPT၊ ဗီဒီယို ပြန်ဖွင့်ခြင်း) ရောနှောပြောင်းခြင်း၊
2. အသံပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ခြင်း- ဒစ်ဂျစ်တယ် ရောနှော+ အင်နာလော့ ရောနှော+ အသံ ဟာ့ဒ်ဝဲ နှောင့်နှေးမှု စက်ပစ္စည်း+ အသံနှင့် ဗီဒီယို ထပ်တူပြုခြင်း
3. REC-3840×2160@60fps၊SD ကတ် FAT32exFAT၊MP4/MOV၊
8. AUT ပြောင်းခြင်း၊
KD-LC-16N ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းဘူတာရုံ အိတ်ဆောင်လက်တွေ့ဘဝတွင် လုပ်ငန်းသုံး ဗီဒီယိုကင်မရာများ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု စက်ပစ္စည်း
1. ဗီဒီယိုလုပ်ဆောင်ခြင်း- ဟာ့ဒ်ဝဲပြောင်းသည့်နေရာ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲအဝင်အချက်ပြမှု (SDI၊ HDMI၊ HDBaseT)+DDR ဖိုင် (ဗီဒီယို၊ ရုပ်ပုံ၊ PPT၊ ဗီဒီယိုပြန်ဖွင့်ခြင်း)+ တိုက်ရိုက်လွှင့်ကွန်ရက် ထုတ်လွှင့်မှု (တွန်း၊ ဆွဲထုတ်)+ NDI+SRT၊ ရောစပ်ထားသော ကူးပြောင်းခြင်း;
2. အသံပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ခြင်း- ဒစ်ဂျစ်တယ် ရောနှောစက် + အင်နာလော့ ရောစပ်စက် + အသံ ဟာ့ဒ်ဝဲ နှောင့်နှေးမှု စက်ပစ္စည်း + အသံနှင့် ရုပ်ပုံ တစ်ပြိုင်တည်း ချိန်ကိုက်မှု ထိန်းချုပ်မှု
3. ရိုက်ကူးခြင်း- HD ဗီဒီယို MPEG2+MP4+ တပ်ဆင်ပြီး ဟာ့ဒ်ဝဲ အသံဖမ်းယူနစ် (အရန်သိမ်းခြင်း);
4. တိုက်ရိုက် : Http၊ Rtmp၊ SRT;